Shirkii Archives - Ibsaa Jireenyaa
July 13, 2020 Sammubani 2 comments
Kufrii fi shirkiin hojii gaggaarii hojjatan akka nama jalaa balleessu hanga amma fakkeenya waliin ilaalle jira. Namni hojii gaarii yommuu hojjatu, akka nama biqiltoota dhaabuu fi kunuunsuti. Biqiltoota dhaabuu fi kunuunsu waliin balaas irraa eegu qabaa miti ree? Namni hojii gaggaarii hojjatus akkanuma. Mee amma kana fakkeenyaan haa ilaallu:
July 7, 2020 Sammubani Leave a comment
3-Gabricha nama baay’een horatamuun wal fakkeessu
Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa mushrika gabricha namoota baay’een horatamuutiin wal fakkeesse. Nama Rabbiin qofa gabbaru immoo gabricha namticha tokko qofaan horatamuun wal fakkeesse. Ergasi isaan lamaan akka wal hin qixxoofne ni ibse.
July 5, 2020 Sammubani Leave a comment
Dhugumatti, Rabbiin ala wanta biraa gabbaruun (waaqeffachuun) salphinnaa fi dararaa guddaatti nama darba. Fakkeenyaan haala nama kanaa ibsuun dhugaa kana ifa baasa. Fakkeenya nama Rabbii olta’aan ala wanta biraa waaqeffatuu bakka sadiitti qoonne ilaalu dandeenya: